Ujeedada jardiinadu waxay u egtahay inay kujirto waxyaabo badan oo qodis ah iyo qodid iyo carrada hareeraha ciidda, badiyaa laxiriirta ka saarista haramaha ama gogosha jilicsan. Had iyo goor way fiican tahay in la dhawaado ficil ahaan intii suurtagal ah, taas oo micnaheedu yahay in marar badan lagaa rabo inaad fuliso ...
difaaca daboolka jilibka
Dharka adag ee adag ee 'velcro' ee loo yaqaan 'velcro' ayaa la macno ah in muruqyadan xawaaraha ahi ku dhejinayaan jilbahaaga sida lugaha neoprene. Padding waxaa lagu siiyaa xumbo qaro weyn ah oo bixisa difaac jilicsan, iyo godadka goynta jilibka ka sarreeya waxay bixiyaan qaddar dabacsanaan leh, iyadoo loo oggolaanayo v lama huraanka ah ...
Sariiraha jilibyada ugu fiican iyo gogosha 2018
Gogosha jilbaha iyo gogosha ugu fiican ayaa kaa ilaaliya qabowga, sagxadaha wasakhda ah marka aad gaariga DIY dhigayso. Waxaad badbaadin kartaa lacag adoo ku sameysanaya booskaaga iyo shaqooyinka gaarigaaga, laakiin waxay noqon kartaa mes ...
Suuqa Weyn ee Global Knee Pad 2018 Warshadaha, Isbedelka iyo Saadaasha 202
Suuqa Caalamiga ah ee Jilibka loo yaqaan 'Global Knee Pad Market' waa suuq si dhakhso badan u kobcaya sannadaha hadda jira. Suuqa Knee Pad wuxuu sameeyay horumar degdeg ah sannadihii la soo dhaafay iyo sannadihii la soo dhaafay waxaana suuragal ah inuu horay ugu socdo horumar joogto ah sannadaha soo socda. Caalamka ...